सडकमा मोटरसाइकल र गाडी चलाउँदा नयाँ नियम, नमाने सिधै कारवाही ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/सडकमा मोटरसाइकल र गाडी चलाउँदा नयाँ नियम, नमाने सिधै कारवाही !
काठमाडौं – नमूना सडकको रूपमा विस्तार गरिएको कलंकी–कोटेश्वर चक्रपथ खण्डमा सवारी दुर्घटना बढेपछि गति नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दुर्घटनामा परी १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २३ जना गम्भीर र ४५८ जना सामान्य घाइते भएका छन् । दुर्घटना भएका सावरी साधनमा मोटरसाइकल, कार, जीप, ट्याक्सी, माइक्रोबस, बस र ट्रिपर गरी एक हजार १७० वटा छन् ।
कलंकी–कोटेश्वर सडकमा सवारी दुर्घटना हुनुमा विभिन्न कारणमध्ये तीव्र गति मुख्य कारण भएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले बताए । सोमबारबाट कलंकीदेखि कोटेश्वरचोकसम्म गति नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
सडकको मुख्य भाग (मेन लेनमार्ग) मा प्रतिघण्टा ५० किलोमिटर र सर्भिस (सहायक लेन) मार्गमा प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गतिमा सवारी गुडाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर चालकले आफूखुसी ८०/९० देखि एकसयसम्मको गतिमा चलाउने गरेको पाइएको छ ।
फराकिलो र खाली सडक देख्नेवित्तिकै आफूखुसी सवारीको गति लिँदा दुर्घटना बढेको भनाइ उनको छ । मंगलबारबाट तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने चालकलाई कारवाही हुने भएको छ । सवारीको गति नाप्न ‘लेजर–गन’ प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
‘राडर गन’को विकसित रूप लेजर गनको सहयोगले तीव्र गतिमा गुडिरहेका सवारीलाई लक्ष्यित गरी जाँच गर्ने र स्लिपपत्रसहित घटनास्थलमा नै कारबाही गर्ने जानकारी महाशाखाले दिएको छ । महाशाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रभु ढकाल चालक आठ लेनको सडकप्रति अभ्यस्त भई नसकेकाले पनि दुर्घटना बढेको बताउँछन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
‘चार–चार, आठ लेन’ यो सडक नेपालका लागि नमूना सडक हो । ढकालले भने, ‘यसको बनावटमा केही प्राविधि कमीकमजोरी भएका होलान् तर चालकले ट्राफिक नियमको पालना गर्नैपर्ने पर्छ ।’
त्यस्तै सडक निर्माणमा प्राविधि त्रुटि देखिएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । सडक विभागका एक प्राविधिक अनुसार आठ लेनको सडकमा जेब्रा क्रसिङ राख्न उचित हँुदैन । अन्डरपास तथा आकासे पुल अनिवार्य हुनुपर्छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘सडकको बीच भागमा डिभाइडर तथा साइड लाइट पनि छैन ।’ सडक प्रयोगकर्ता तथा चालकले ट्राफिक सिग्नल, चिह्न, सडकमार्क प्रयोग गर्न नजान्दा पनि दुर्घटना बढेको हो ।
स्थानीयले पनि सडक पैदलयात्री मैत्री नभएको गुनासो गरेपछि पाँचस्थानमा आकासे पुल निर्माण शुरू गरिएको छ । जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्दा लामो र असुरक्षित हुने भएकाले नगरवासीले बाक्लो बस्ती तथा स्कुल भएका स्थानमा आकासे पुल बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।